ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း
The Lady and the Boat Rides [in Burma/Myanmar] February 20, 2016 ENGLISH, ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း, အထွေထွေသတင်း Maung Zarni – TRANSCEND Media Service Brother, be kind, she is inabind. Nazi Aye Maung has gagged her from ever mentioning “the word Rohingya from your mouth” unless she is prepared to lose Rakhine support in Arakan. Against her presidential ambitions, Myanmar generals have unleashed Ma Ba Tha, i.e., Association for
Read More United Behind So-Called ‘Rohingya” Genocide July 1, 2014 ENGLISH, ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း by Maung Zarni – TRANSCEND Media Service A poem in memory of the two Rohingya infants who became the well-publicized victims of Myanmar’s “Buddhist” genocide. We areagreat nation of “Buddhist” Myanmar We send our waves of Metta for World Peace We boast about our Oxonian Nobel Lady who was once
Read More Metta for “Mus”?!! You must be kidding!: A New Myanmar and its “Buddhist” Tales July 1, 2013 ENGLISH, ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း by Maung Zarni – TRANSCEND Media Service In our Myanmar A-wee-zi (an abode of Buddhist Hell) Brother, tell your beloved “Kalars” ‘Neither “Mus” roaches nor “Bangali” viruses are welcome’ here. In our Golden Land You may no longer find Kipling’s ‘flying fishes’ But there are generals
Read More ဂုဏ်ယူစရာများ မတူညီကြပါ February 22, 2013 ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း . ပြည်ထောင်စုကြီး အဓွန့်ရှည်ခဲ့တာ ငါ ဂုဏ်ယူမိတယ်။ . . ပြည်ထောင်စုကြီး အစွန့်ရှည်ဖို့ဆိုပြီး ပြည်ထောင်စုသားတွေကို သတ်ဖြတ်နှိပ်စက်နေတာတော့ ငါ စက်ဆုတ်မိတယ်။ . . ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းနေတာ ငါ ဂုဏ်ယူမိတယ်။ . . ဒီမိုကရေစီ သိုးရေ ဝံပုလွေခြုံပြီး ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို ဒီမိုခရိုနီလုပ်နေတာကိုတော့ ငါ ရွံရှာမိတယ်။ . . အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန် မဆိုထားနဲ့ဦး ရိုးရာ၊ မိရိုးဖလာ၊ နတ်ကိုးကွယ်မှုတောင် လက်ခံအသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်မှာ လူဖြစ်ရတာ ငါ ဂုဏ်ယူမိတယ်။ . . စာအုပ်ထဲမှာသာ ပုံနှိပ်ထားပြီး လက်တွေ့မှာ အမှိုက်လိုပုံထားခံရတဲ့ အစိမ်းရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့ စာအုပ်ကြီးအတွက် ငါ ရင်လေးမိတယ်။ . . မြို့တိုင်း၊
Read More အိမ်ရှင်နဲ့ ဧည့်သည် November 6, 2012 ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ သီချင်း အိုးမဲ့အိမ်မဲ့သွားတာထက် ရင်ခွင်မဲ့သွားတဲ့ အဖြစ်ဆိုး ကြုံဖူးမှ စာ၊ ခံဖူးမှ နာတတ်မယ်။ မီးလောင်ပြာကျသွားတာ စာသင်ခန်းတွေသက်သက် မဟုတ် သင်ထွေးအံရွတ်ခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ။ မီးလောင်ပြာကျသွားတာ ဘုရားကျောင်းသင်ခန်းတွေ မဟုတ် ဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့ မေတ္တာတရားတွေ။ ဧည့်သည်တွေတဲ့။ ဟုတ်တယ် ဧည့်သည်တွေ အမှန်ပဲ အားလုံးဟာ ဧည့်သည်တွေပဲလေ မမြဲခြင်းတရားသာ အိမ်ရှင်စစ်စစ် တချို့ကတော့ ရင်ခွင်မဲ့နေတဲ့ ကြိုဆိုသူမဲ့ ဧည့်သည်တွေပေါ့။ ယာယီ အိမ်ရှင်တို့ရေ ပျူပျုငှါငှါ မီးရှို့ကြ မီးနဲ့ ဆော့သူတွေ မီးသင်္ဂြိုလ်စက်ထဲ လောင်ကျွမ်းပြာမကျခင် ခဏ။ —— ဖိုးသကြား